Isiphepho sishiya umonakalo omkhulu nokufa kwabantu ababili eMurcia nase-Alicante | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuchichima koMfula i-Orihuela. Isithombe: Manuel Lorenzo (EFE)
Izimvula nomoya okuthinta yonke iningizimu-mpumalanga yeNhlonhlo Yase-Iberia naseziQhingini zaseBalearic kubanga umonakalo omkhulu. Phakathi kwalowo monakalo esiwutholayo ukugcwala komfula, ukucekelwa phansi kwempahla kanye nezikhukhula emakhaya, ukuvalwa kwezikole nemigwaqo futhi okubi kakhulu, ukufa kwabantu ababili.
Lesi siphepho sizoqala ukuncipha futhi siphume kusasa enhlonhlweni kodwa sizoqhubeka naseziQhingini zaseBalearic nakwezinye izingxenye zeCatalonia.
Izindlu ezinezikhukhula. Isithombe: Monica Torres
Ukushona kwenzeke e UMurcia no-Alicante. Endabeni kaMuria, isidumbu sendoda eneminyaka engu-40 ubudala sathathwa yimanje sayiswa endlini eLos Alcázares. Kwenzeke ngoMgqibelo owedlule lapho indoda esikhulile yadudulwa ngamandla amanzi yaya eFinestrat Cove.
Ngokuphathelene nokuchichima, sithola ukuthi umfula iSegura njengoba udlula e-Orihuela e-Alicante kanye neJúcar Hydrographic Confederation inqume ukuqala ukukhishwa emachibini aseBellús naseBeniarrés ukunciphisa ukwanda kokugeleza.
1 Ukulimala okubangelwa eMurcia
2 Umonakalo obangelwe eValencia naseziQhingini zaseBalearic
3 Ubungozi abukapheli okwamanje
Ukulimala okubangelwa eMurcia
Ukuze kuhlolwe umonakalo odalwe yisiphepho, umongameli waseMurcia, uPedro Antonio Sánchez, uyalele umhlangano wokuxhumanisa wabo bonke abasebenzi bezimo eziphuthumayo ukwazi ukuzikala. Lo mhlangano ubuhanjelwe nesithunywa sikaHulumeni, u-Antonio Sánchez-Solís.
Ngaphezu komhlangano, ungqongqoshe wezangaphakathi, UJuan Ignacio Zoido, uhambele eMurcia ukuvakashela zonke izindawo ezithinteke kakhulu futhi uhlanganise amasosha aphethe imisebenzi yezimo eziphuthumayo, ezokuphepha nokusiza.
UMnyango Wezokuvikela uthumele ibutho elisha le- Iyunithi Yezimo Eziphuthumayo Zempi (UME) lokho kuzosiza amasosha ayi-160 atshalwe entathakusa eLos Alcázares. Ibutho elisha linamabutho angaba ngamashumi amahlanu.
Ukuchichima kweRio Clariano. Isithombe: Juan Carlos Cárdenas (EFE)
Imvula ibinamandla kangangokuba ku usuku olulodwa lunethe ama-57% akho konke okuye kwanetha ngonyaka. Lokhu kudale izikhukhula emigwaqeni engu-19 komasipala baseMurcia baseCagagena, eTorre Pacheco, eSan Javier, eSan Pedro del Pinatar, e-ilguilas naseMazarrón. Kuphoqe futhi ukuthi kuvalwe izibhedlela cishe sonke isifunda, kanye namakolishi nezikhungo komasipala abangama-28 nasemanyuvesi amathathu. Ukuze welaphe abantu abathintwe yizikhukhula, i-Infanta Elena High Performance Center, I-Red Cross ifake indawo yokukhosela yabantu abangaba ngu-200 abakhishwe emakhaya abo eLos Alcázares.
Ukuvolontiya kweRed Cross. Isithombe: Manuel Lorenzo (EFE)
Umonakalo obangelwe eValencia naseziQhingini zaseBalearic
Izifundazwe zase-Alicante naseValencia zisengcupheni ethile yingakho imigwaqo eyi-14 isanqamukile ngenxa yezikhukhula. ngokuqhubekayo babalelwa ku-129 omasipala abamise izifundo zabo kanye namakhampasi amane eMiguel Hernández University of Elche.
EValencia umfula iClariano ugcwale futhi wabangela ukugcwala kwemizi eminingi edolobheni lase-Ontinyent futhi kwadingeka ukuthi basuswe. Umfula iMagro, ongumfula iJúcar, ubhalise isikhukhula esibaluleke kakhulu njengoba sidlula eReal, eMontroy naseAlcudia.
Izikhukhula emagaraji. Isithombe: Morell (EFE)
Ngakolunye uhlangothi, eBalearic Islands, i-Emergency Service isihambele izehlakalo eziyi-148 ngamahora ayi-12 kuphela. Asikho nesisodwa sezigameko esasibucayi kakhulu, kodwa kwakwanele ukusika amakilasi namuhla nakusasa komasipala abayi-17 ngenxa yobunzima bokushayela emigwaqeni.
Ubungozi abukapheli okwamanje
Ubungozi bezikhukhula nezimvula ezinkulu basaqhubeka e-Alicante naseValencia. Ngokusho kweState Meteorological Agency, isexwayiso esibomvu sigcinelwe imvula kanye nesaziso esiwolintshi esisogwini ngenxa yemimoya enamandla namaza angaphezu kwamamitha amane.
Umongameli weGeneralitat Valenciana, uXimo Puig, umemezele ukuthi uHulumeni wakhe uzophasisa izinyathelo ngalo Lwesihlanu ukunciphisa umonakalo odalwe yilesi siphepho nangalowo wangomhla zingama-27 no-28 kuNovemba.
Ngenhlanhla, kusukela kusasa lesi siphepho sizobe sidamba eningizimu-mpumalanga ye-peninsula, yize izimvula ezinamandla ziqhubeka eBalearic Islands (ikakhulukazi eMallorca naseMenorca) kanye nasenyakatho-mpumalanga yeCatalonia.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Izikhukhula » Isiphepho sishiya umonakalo omkhulu nokufa kwabantu ababili eMurcia nase-Alicante